“Fursada ay Barcelona ugu guuleysan karto La Liga waxay kala siman tahay Real Madrid” – Quique Setién – Gool FM
“Fursada ay Barcelona ugu guuleysan karto La Liga waxay kala siman tahay Real Madrid” – Quique Setién
(Barcelona) 14 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Quique Setién ayaa shaaca ka qaaday inuu aamisan yahay in fursada ay Blaugrana ugu guuleysan karto koobka horyaalka La Liga ee dalka Spain xilli ciyaareedkan ay ka siman yihiin Real Madrid.
Kooxda Real Madrid ayaa ilaa iyo haatan kaga hoggaamineysa horyaalka La Liga 3 dhibcood dhigeeda Barcelona oo fadhisa kaalinta labaad ee miiska kala sarreynta.
Haddaba tababare Quique Setién ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay marqribka barri oo Sabti ah ku soo dhaweyn doonaan kooxda Getafe garoonka Camp Nou wuxuu ku sheegay:
“Horyaalo badan ayaa lagu go’aamiyaa faahfaahino yar, midkoodna kooxaha u dagaalamaya magaca ma xakamayn karaan”.
“Waxaan u maleynayaa in musharaxnimada horyaalnimada aan kala simanahay Real Madrid, waxaan ka hooseynaa saddex dhibcood, balse waxaan heysanaa kulan aan iyaga kula ciyaari doono garoonka Santiago Bernabeu” ayuu yiri tababare Quique Setién.
RASMI: Manchester City oo laga ganaaxay ka qeyb galka tartanka Champions League